Ravan’ny Safodrano Sy Ny Fihotsahan’ny Tany Ny Faritra Avaratr’I India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 1:16 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, Italiano, English
Namono olona maherin'ny 1.000 ary nampihitsoka olona efa ho 70.000 ilay tondradrano sy fihotsahan'ny tany tany avaratr'i India, izay ny ankamaroany dia mpizaha tany sy mpanao fivahinianana masina zara raha mahita vatsy sy ny fialofana.
Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Jona 2013 tamin'ny fiandohan'ny fahavaratra, nisy oram-be tsy nijanona nanafotra ny fanjakan'i Himachal Pradesh sy Uttarakhand sy ny manodidina. Namonjy olona maherin'ny 18.000 tamin'ny fiara fitaterana manokana na angidimby ( helikoptera) ny tafika Indiana.
Toerana mitahiry ireo zava-dehibe maro sy ny tantaran'ny fivahiniana masina Hindo, ny havoanan'i Himachal Pradesh, to an'i Badrinath, na fara-faharatsiny toerana lehibe iray misy ny tantaran'ny fivahinianana masina Sikh, ny Hemkund Sahib, ankoatra ny toerana fanaovana fizahantany sy fanaovana dia lavitr'ezaka. Mba ho fanampiana ireo niharam-boina dia nandefa miaramila 10.000 sy angidimby 11 ny tafika, mpitsoraka anaty rano 45 ny an'ny tafika an-dranomasina, ary fiaramanidina 43 ao anatin'izany ny angidimby 11 ny tafika an'habakabaka.
Ampiasain'ny maro ny media sosialy hitrandrahana vaovao mikasika ny havany sy ireo olom-pantany. Mampakarina sy nozaraina tao amin'ireo tranonkala sosialy ireo sary sy laharana antsoina raha mila vonjy. Napetraky ny Google ny Tolotra ho Fitadiavana Olona amin'ny fiteny Hindo sy Anglisy tao aminy mba hanomezana vaovao momba ireo olona tsy hita tany amin'ireo faritra tratry ny tondradrano. Manana ny lisitr'ireo hetsika tena ilaina sy ireo laharana ho fanampiana ny Media Nama. Namorona bilaogy storify mivantana ny IBNLive mba hampivondronana ireo vaovao momba ireo olona tsy hita sy ny sary avy any amin'ny toerana isehoan'ny loza.
Ao amin'ny media sosialy atosik'i José Covaco (@hoozay) DJ -n'ny New Delhi radio ny olona mba hirona ho any amin'ny bilaogin'ny IBNLive :
@HoeZaay: Betsaka laharana ilaina eto. (RT) AVERENO BITSIHANA tahaka ny adala azfd. RT @sardesairajdeep Ahoana no hanampianareo ireo tra-boina ukhand http://t.co/dGOa2tJTCT
Niantso hetsika ivelan'ny aterineto avy amin'ireo mafana fo i Anurag Khanna (@AnuragJtpac) avy any Kochi :
@AnuragJtpac: Firy aminareo ao amin'ny Twitter no an-dàlana handeha hanampy ny ao #uttarakhand. Azoko antoka fa betsaka ireo avy any Dheli no afaka hitarika. Ho hitantsika eo ny firaisankina #india
Nampatahotra ireo sary voarakitra an-dahatsary avy amin'ilay safodrano. Inty misy sarimihetsika nalainà mpivahiny iray mampiseho fiara fitaterana nianjera tany ambany tany noho ny fihotsaky ny làlana. Nolazain'i vavolombelona nanatri-maso fa nitondra mpandeha maherin'ny 30 izay tsy hita intsony io fiara fitaterana io.
Nangataka ireo rehetra mpikambana ao amin'ny parlemanta ny Filohan'ny Kongresy Nasionaly Indiana, Sonia Gandhi, mba hanolotra ny karama iray volan'izy ireo hanampiana ny asa famonjena. Kanefa nomarihin'i Sunny Singh (@sunnysingh_nw3), mpianatra PhD fa :
@sunnysingh_nw3: IRIKO ireo politisiana ao #India avy amin'ny antoko REHETRA hampijanona ny fitetezam-paritra feno rà mandriakany #Uttarakhand – lanian'izy ireo ny harena sarobidy izay azony ampiasaina ho an'ny asa famonjena.
Manohitra ny famadihana ho resaka politika ny loza i Pandit Kuldeep Vyas (@PtKuldeepVyas), olon'ny lalàna avy any Rajasthan :
@PtKuldeepVyas: #Uttarakhand Tsy tokony avadika resaka politika ny loza voajanahary #Uttarakhand … Mahamenatra ny ataonareo ry netas tia kolikoly:-( Inona no nataontsika raha tsy teo ny tafika. pic.twitter.com/vcIYrO8uVm
Tafika Indiana mamonjy mpizaha tany sy mpanao fivahinianana masina nihitsoka tany Uttarkhand. Sary avy amin'i Bhaskar Mallick. Fizakà-manana Demotix (20 Jona 2013)
Eo anivon'ireo hafanam-po sy ny faharisihina nandritra ny asa famonjena sy ny fanampiana amin'ny maha-olona, no tsikaritra fa nanjary notrandrahana, nolalaovina, ary norahonana ireo olona nihitsoka ireo. Nisy tatitra iray nitantara ny fomba nahazahoanà mpitondra fiarakaretsaka iray vola tsy mampino 15.000 ropia ( 300 dolara Amerikana eo ho eo) tamin'ny dia 200km nitondrany ireo tsy manan-kialofana efatra.
‏Tezitra mafy tamin'ny tantaran'ilay toeram-pisakafoanana nitaky tamin'ireo niharam-boina tamin'ilay tondradrano sanda mitovy amin'ny 10 dolara Amerikana ho anà vary iray tsatokaty ary efatra dolara Amerikana ho an'ny mofo ilay mpanadihady politika, Saral Patel (@PatelSaral) :
@PatelSaral007: Ny zava-manjo any Uttarakhand: 500 Rs ny vary iray tsatokaty ary 180 Rs ny roti http://ow.ly/mhCKP #Shame
Notsikerain'i Yash Gaddhyan (‏@yashgaddhyan) ireo andrana hangalàna amin-kafetsena ny volan'ireo niharam-boina :
@yashgaddhyan: Miaina anaty firenena iray isika izay misy olona miezaka mameno paosy na dia ao anatin'ny loza voajanahary miseho aza. #Uttarakhand
Tsikaritr'i Geetika (@ggiittiikkaa) ny fisavoritahana amin'ny fizarana ny fanampiana :
@ggiittiikkaa: Tsy misy manampahefana mba handamina, hanangona sy hitondra ireo fanampiana… Tsy misy mpiandraikitra mandray ny fizaràna ny fanampiana rehefa tafapetraka ny helikoptera. Ambony ambany ao #Uttarakhand
Tsikerain'i Aabhas Pandya (@abyboy), mpanao gazety, ny fahanginan'ireo vondron'orinasa amin'ny fanamafisana ny asa famonjena:
@abyboy: Fahanginana tanteraky ny vondron'orinasa ao India manoloana ny faharavana mahazendan'i Uttarakhand… tsy misy na teny iray aza, tsy misy fanampiana, tsy misy helikoptera ! #uttarakhand
Ny tafika Indiana manandrana mamonjy ireo mponina tratry ny tondradrano tany Uttarakhand. sary avy amin'i Prabhat Kumar Verma. Fizakà-manana Demotix (20 Jona 2013)
Maro ny fanehoam-pijery manodidina io loza io, voa-janahary sa nataon'olombelona. Ireo zavatra maro nataon'ny olona, ao anatin'izany ny foto-drafitrasa tsy misy drafitra manamorona ireo reniranon'i Himayalan, no voalaza fa fototr'io loza io. Ao amin'ny bilaoginy, izao no nosoratan'i Karthick, injeniera mekanika no sady mpianatra resa-pitantanana :
Nisy mpitsidika 3 Crore [30 tapitrisa] io antsoina hoe Char Dham Yatra [fivahiniana masina Hindo ] io tamin'ny taon-dasa. Ny fizahantany no iray isan'ny mamatsy ny fanjakana. Na dia tena mampalahelo aza ireo foto-drafitrasa ary tsy mihevitra ny hanamboatra ny làlana sy ireo fotodrafitrasa ny Governemanta.
Namafisin'ny mpitoraka bilaogy Rishi Aggarwaal fa tokony ho ferana ny mpanao fivahinianana masina ao Char Dham Yatra isan-taona noho ny fitomboan'ny mponina.
Niangavy ny haino aman-jery i Vineet Khare (@vineetkhare), mpanao gazety, mba tsy ho izay zavatra mampientanentana sy mahafinaritra azy ihany no ho avoakan'ireo media mandritra ny fanaovany fanadihadiana :
@vineetkhare: Ry mpanangom-baovao malala isany, aza aetry ho toy ny “tamasha” (vazivazy ratsy) ao anaty fahitalavitra ny zava-doza any Uttarakhand.
Mandritra izany, tsy mbola nitsahatra ny orana fa mbola manampy ny fahorian'ireo olona an'arivony. Izao no nosoratan'i Sagar Singh (@RtSagar), mpianatra ho injeniera :
@RtSagar: ‏Avy ny orana any amin'ny faritra maro any U'khand! Aoka izay Andriamanitra ô, mamindrà fo aminay ! #Uttarakhand